स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि - स्वास्थ्य - साप्ताहिक
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धि
हेपाटाइटिस बी र मधुमेहको औषधि नेपालमै
हेपाटाइटिस बीका लागि अत्यावश्यक मानिने औषधि इन्टेकाभिरको उत्पादन नेपालमै सुरु भएको छ । नेपाली फर्मास्युटिकल कम्पनी म्याग्नस फर्माले स्वदेशमै उक्त औषधिको उत्पादन सुरु गरेको हो ।
नेपालमा हेपाटाइटिस बीको बढ्दो प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै म्याग्नसले इन्टेका–बी ब्रान्ड नामका साथ ‘इन्टेकाभिर’ नेपाली बजारमा ल्याएको हो । इन्टेका–बीले हेपाटाइसटिस बी भाइरस बढ्न रोक्छ, जसले गर्दा शरीरमा हेपाटाइटिस बी भाइरस बढ्न पाउदैन र रोगको रोकथाम हुन्छ ।
त्यसैगरी म्याग्नसले इम्पाग्लिफ्लोजिन नामक मधुमेहको औषधि बजारमा आएको छ । म्याग्नसले औषधिको ब्रान्ड नेम भने ‘ग्लिाफज’ राखिएको छ ।
डीएनए परीक्षण गर्ने मेसिन
चितवनको भरतपुरस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा डीएनए परीक्षण गर्ने ‘रियल टाइम पिसिआर मेसिन’ भित्रिएको छ । अमेरिकी युथ विश्वविद्यालयको अनुदान सहयोगमा नेपाल आइपुगेको उक्त मेसिनमार्फत पाठेघरको ह्युमन प्यापिलोमा स्क्रिन गर्न सकिन्छ । यो मेसिनको प्रयोग पाठेघरको पानी वा मासु लिएर एचपीभी भाइसरको मात्रा पत्ता लगाउन गरिन्छ । यसअघि चितवनमा यो प्रविधि नहुँदा परीक्षणका लागि भारत जानुपर्ने अवस्था थियो भने मेसिन भित्रिएसँगै उक्त बाध्यता हटेको छ ।
ट्रकोमा रोग निवारणमा सफलता
नेपाल अन्धोपनको प्रमुख कारणका रूपमा रहेको ट्रकोमा रोग निवारण गर्ने दक्षिणपूर्वी एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको छ । सन् २०१८ को मे महिनामा ११ संङगठनले आधिकारिक रूपमै नेपाललाई जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको ट्रकोमा निवारण गर्ने देश घोषित गरेका थिए ।
ट्रकोमा क्लाइमेडिया ट्रकोमाइटिस नामक जीवाणुका कारणले आँखामा लाग्ने एक प्रकारको रोग हो । यसका कारण आँखाको ढकनीमुनिको भागमा खस्रोपन सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा आँखाको बाहिरी सतह टुट्दै अन्त्यमा अन्धोपन हुन्छ ।
कलेजो प्रत्यारोपणका लागि शिक्षण अस्पताल
त्रिवि शिक्षण अस्पतालले गएको माघ महिनामा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्‍यो । लाइसेन्स पाएसँगै अस्पतालले प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अस्पतालका कलेजो प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक डा. रमेशसिंह भण्डारीले यसको नेतृत्व गरेका छन् । अस्पतालले सुरुका केही प्रत्यारोपण भारतको एपोलो अस्पतालका कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन डा. निरभ गोयलको सहयोग लिनेछ ।
महिनावारी सुकेको चार वर्षपछि आमा
महिनावारी सुकेको चार वर्षपछि काठमाडौंकी एक महिला आइभिएफ अर्थात् टेस्ट ट्युब बेबी पद्धतिबाट आमा बन्न सफल भइन् । ललितपुरको जालखालेखस्थित अल्का आइभिएफ एन्ड फर्टिलिटी सेन्टरमा टेस्टट्युब बेबी विशेषज्ञ डा. नुतन शर्मासँग उपचार गराएकी आमा बन्ने ती महिला ४५ वर्षकी भएको बताइएको छ । डा. शर्मासँग एक वर्षदेखि बाँझोपनको उपचार गराउँदै आएकी ती महिलाले गएको माघ महिनामा बयोधा अस्पतालमा जुम्ल्याह सन्तान जन्माएकी हुन् ।
वीर अस्पतालमा नयाँ सिटी स्क्यान
वीर अस्पतालमा १ सय २८ स्लाइस क्षमताको नयाँ सिटी स्क्यान जडान गरिएको छ । अस्पतालले उक्त मेसिन ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । अस्पतालमा यसअघि १६ स्लाइस क्षमताको सिटी स्क्यान थियो । सिटी स्क्यान मेसिनको जति बढी क्षमता भयो, उति राम्रो रिपोर्ट आउँछ । वीरको पुरानो सिटी स्क्यान पनि बिग्रिएको थियो, जसका कारण बिरामीले बाहिर जानु पर्ने बाध्यता थियो । नयाँ उपकरणबाट सेवा सुरु भएसँगै बिरामीले अस्पतालभित्रै सेवा प्राप्त गर्न थालेका छन् ।
प्रकाशित :वैशाख ६, २०७६
कार्तिक १ देखि ७ गतेसम्मको राशिफल
लियो क्लब अफ चितवन इष्टका युवाले गरे स्वास्थ परिक्षण
सुखी परिवारमा राज्यको लगानी कति ?
मुटुको स्वास्थ्य किन आवश्यक छ ?
मृत्युको एउटा प्रमुख कारण : आत्महत्या
डिप्रेसनको समस्या र समाधान कार्तिक २, २०७६
लियो क्लब अफ चितवन इष्टका युवाले गरे स्वास्थ परिक्षण आश्विन ३०, २०७६
जानिराख्नुहोस् नाङ्गै सुत्नुका फाइदा आश्विन ३०, २०७६
चाडपर्वको खानपानमा सावधानी आश्विन १८, २०७६
सुखी परिवारमा राज्यको लगानी कति ? आश्विन १५, २०७६
व्यस्तताबीच गर्भको स्याहार आश्विन १४, २०७६
मुटुको स्वास्थ्य किन आवश्यक छ ? आश्विन १२, २०७६
अल्जाइमर्स के हो ? आश्विन ६, २०७६
यौन संक्रमणबाट जोगाउँछ यी बानीले भाद्र ३१, २०७६
ध्यान किन भाद्र ३०, २०७६